सामान्य जानकारी : कहाँ, कसरी छापिन्छ नेपाली रुपैयाँ ? « Nijamati Khabar
सामान्य जानकारी : कहाँ, कसरी छापिन्छ नेपाली रुपैयाँ ?
नेपालको मुद्रा रुपैयाँको नोट र सिक्का देश बाहिरको नोट तथा सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छाप्ने गरिएको छ । सिक्का र नोट छाप्न देशबाहिरका यस्ता भिन्नाभिन्नै कम्पनीलाई जिम्मा लगाइने गरिन्छ । विश्वमा यस्ता नोट छाप्ने कम्पनी लगभग २० वटा छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपाली नोट छाप्नको लागि २०७१ पौष २५ गते १० कम्पनीलाई प्रि क्वालिफिकेसनमा सूचीकृत गरेको थियो ।
चीनको चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन,
जर्मनीको जिस्क एण्ड डेभ्रिएनट जिएमबिएच,
स्वीडेनको क्रेन एबि,
बेलायतको डिलारु करेन्सी,
नेदरल्याण्डको जोन इन्सेड बैंकनोेट बिभि,
क्यानडाको क्यानेडीयन बैंक नोट कम्पनी लिमिटेड,
जर्मनीको बन्डेस डर्केरी जिएमबिएच,
फ्रान्सको ओबेरथर फिडुकेयर,
रसियाको फेडरल स्टेट युनेटरी इन्टरप्राइजेज र
इन्डोनेसीयाको पेरुम पेरुरी राष्ट्र बैंकको क्वालिफिकेसन सूचिमा अटाएका कम्पनी हुन् ।
नेपालमा वि.सं. २००२ सालदेखि कागजको नोट छाप्न सुरु गरिएको हो । राजा त्रिभुवनको पालामा नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन सुरु भएको हो । नेपालले नोटको चलन चल्ती सुरु गरेपछि विशेषत बेलायत, होल्याण्ड अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पैसा छाप्दै आएको थियो ।
बेलायतको डिलारु करेन्सीमा नेपालले धेरैवर्ष सम्म नोट छापेको थियो । केहिसमयसम्म बजारमा आएको पोलिमर अर्थात् प्लाष्टिकको नोट भने रिजर्ब बैंक अफ अष्ट्रेलिया मातहतको नोट प्रकाशन गर्ने कार्यालय नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियाले छापेको थियो ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नोट छाप्ने कम्पनी छ । पाँच वर्ष पहिले सम्म नेपालले भारतीय कम्पनीबाट नोट छापेको थिएन । तर, पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा भने भारतबाट समेत नोट छापिएको र त्यसको कागज गुणस्तरीय नभएका कारण पछि छाप्न छोडिएको थियो ।
चीनमा नेपालले सिक्का छाप्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले सिक्का चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीमा सिक्का छाप्दै आएको छ । सिक्का छाप्नको लागि मिन्ट सेवा भएको पैसा छाप्ने कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार अहिले नेपालमा उपलब्ध एक रुपैयाँको सिक्का छाप्न एक रुपैया भन्दा बढि लगानी लाग्छ । नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठूलो नोटको लागत बढी पर्ने गर्दछ । ठूलो नोटमा सेक्युरिटी फिचर्स बढी हुने गरेका कारण यसलाई छाप्नको लागि लागत बढी लाग्ने बताइन्छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी यीनै कम्पनीबाटै नोट छाप्ने गरेको बताइन्छ । यद्यपि, उसले नोट छाप्नुअघि एक पटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दछ । यसमा विश्वका झन्डै २० वटा कम्पनीले आवेदन दिने गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमध्ये १० वटा कम्पनीलाई मात्रै प्रि क्वालिफिकेसनको सूचीमा समावेश गरेकाले तीमध्ये एउटाले जिम्मा पाउँछन् ।
नोट छाप्न कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले ती प्रि क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीको टेक्नीकल र फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरेर एक कम्पनीलाई छनौट गर्ने गर्छ । फाइनान्सियल जजमेन्ट गर्दा भने कम लागतमा पैसा छाप्ने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ ।
यसरी छापेको नोट राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रुममा ल्याएर राख्छ । तर छापिएका नोटको प्रिफेक्स नम्बर चलनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन ।
१) डटपेनको अविष्कार कसले गरेका हुन् ? – जोन जे. लाउड २) नेपाल टेलिकमले कहिलेदेखि